Cloud Programming Platform | GIGALight
Yakagadzirirwa Data Data Optics
Tinonyanya kufunga nezvekushanda kwevashandi kuburikidza nokutenga sangano rekutsvaga rekushandisa paIndaneti kutarisa mamiriro ekushandiswa kwezvigadzirwa panguva ipi zvayo nekupindura panguva yakakodzera kune vatengi uye kugadzirisa matambudziko avo.
Seamless chikwata chekushandisa
Iyo yakabatanidzwa gore cloud service inogona kusunungura zvakasimba michina yezvigadzirwa zvematokisi e-optical, cables optical cables, uye zvishandiso zvemafiber Gigalight's exclusive cloud server.
Tiri kuvaka a Gigalight online store se cloud cloud iyo inogona kusununguka inopindura pamusika kuchinja uye bhizinesi peaks. Uye kuvimba negore gore, tinokwanisa kuchengetedza zvigadziro uye kuvandudza kushanda kwekushanda.
400G QSFP-DD Cheki
200G QSFP56 Cheki
200G QSFP-DD Cheki
40G / 100G QSFP Cheki
25G SFP28 Cheki
Nezvo zvinopfuura 11-teknolojia yegore yekuunganidza nekuchengetedza, Gigalight yakagadzira yakasarudzika dhizaini uye yakatungamira iyo musika maitiro muR & D uye kugadzirwa kweanopenya maTransceivers, Optical zvishandiso uye mamwe minda. Izvo zvave zvichitora zvishoma nezvishoma kuvaka hunyanzvi hwekugadzira transceiver ecosystem pasi pegore renguva, ichipa mushandisi-inoshamwaridzika gore masevhisi evazhinji vanozivikanwa vagadziri pasirese. Inosanganisira: gore rinogadzira chikuva chekutarisa ma transceivers anowoneka ayo anoita kuti vatengi vagadzirise ma transceivers 'encoding, online test, ruzivo rwekubvunzurudza pamhepo & kudyidzana ne server yegore, yakaiswa mumusika; inovandudza iri kure transceiver firmware system; nhevedzano ye SFP+/SFP28/QSFP28 optics checkers; gore rekugadzira system mukusimudzira iyo inokwanisa kuvhura mamiriro ehurongwa, kugadzirwa & kugadzira, chigadzirwa logistic uye imwe data kune vatengi.
Isu tinotarisa pane ruzivo rwevashandisi nekuvaka smart online service chikuva chekutarisa mamiriro e products'kushandiswa chero nguva uye inopindurwa nenguva kune vatengi uye kugadzirisa matambudziko avo. Iyo yakasanganiswa yegore sevhisi inogona kusonamatira michina yezvigadzirwa zvee optical transceivers, anoshanda optical tambo, uye smart fiber maturusi kuburikidza Gigalight Exclusive cloud server. Tiri kuvaka a Gigalight online store se cloud cloud iyo inogona kusununguka inopindura pamusika kuchinja uye bhizinesi peaks. Uye kuvimba negore gore, tinokwanisa kuchengetedza zvigadziro uye kuvandudza kushanda kwekushanda.
Tinogona kusangana nemashandisirwo echishandiswa ekushandisa ekushandisa-ekupedzisira-vashandisi kumatunhu akasiyana kuburikidza nehukama kuwiriranisa kwe database zviwanikwa. Pamhepo gore rekugadzira chikuva, mushandisi-inoshamwaridzika dhizaini, uye 24-awa maawa online vatengi vatengi. Tinogona kupa vatengi vedu nerakanakisa technical tekinoroji yekugadzirisa iyo yakakosha mibvunzo kune vatengi zvakananga. Nekupa masevhisi emitauro yakawanda, tinogona kubata nehunhu hwekutaurirana kwevashandisi kumatunhu akasiyana uye nekuvandudza zvikuru nguva yekutaurirana. Iko kukurumidza kukura kwe mobile Internet kwaitisa iyo APP modhi kuve craze yevashandisi. Inounza ruzivo, ruzivo rwakanaka uye runoshanda & zvigadzirwa zvechigadzirwa kuvashandisi chero nguva chero kupi.
Kufungidzira kweChina Chekushandisa